घरमै सुरक्षित बस्ने कि सडकमा उभिएर प्रशिक्षण दिने ? – Makalukhabar.com
घरमै सुरक्षित बस्ने कि सडकमा उभिएर प्रशिक्षण दिने ?
मकालु खबर	 २०७७ बैशाख ३ ०६:५१ मा प्रकाशित 89 0
वैशाख ३, विराटनगर । प्रहरीले विराटनगरमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरुबाट प्रशिक्षण लिन सुरु गरेको छ । लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरीले मंगलबार बिहानदेखि उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई सडकमा उभ्याएर प्रशिक्षण लिन थालेको हो ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरुलाई डेढदेखि दुई घण्टासम्म सडकमा उभ्याएर उनीहरुबाटै प्रशिक्षण लिन थालिएको हो । विराटनगरमा बिहान र बेलुका मानिसहरुको चहलपहल बढ्दो भएकाले गत चैत्र २८ देखि बिहान ७ बजे र बेलुका ५ बजेदेखि लकडाउनलाई कडा बनाइएको थियो । तर सर्वसाधारणले अटेर गरेको सुरक्षाकर्मीहरुको गुनासो छ ।
नागरिकलाई कोरोना र लकडाउन सम्बन्धि प्रशिक्षणहरु दिएको भएपनि उल्लङ्घन गर्ने नघटेको वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी निरीक्षक विकास राईले बताए । उनका अनुसार लकडाउको २१ दिन पुगिसक्दा समेत उल्लङ्घन गर्ने नघटेपछि उनीहरुलाई नै प्रशिक्षण दिन लगाइएको हो ।
अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई गर्दै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने